Football Khabar » युरो कप छनौट खेल्ने पोर्चुगलको टोली घोषणा : को–को परे ?
युरो कप छनौट खेल्ने पोर्चुगलको टोली घोषणा : को–को परे ?
एजेन्सी, कात्तिक २१
सन् २०२० मा हुने युरो कप फुटबलका लागि जारी छनौट खेल खेल्ने पोर्चुगलको टोली घोषणा भएको छ । छनौटअन्तर्गत सातौं र आठौं चरणका खेल खेल्न पोर्चुगलको टोली आज घोषणा भएको हो ।
प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषले इटालियन युभेन्टसबाट खेल्ने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा कूल २५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् । रोनाल्डोसँगै टोलीमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका बर्नान्डो सिल्भा, पोर्चुगिज पोर्टोका पेपे, बुर्नाे फर्नान्डेज, स्पेनिस बार्सिलोनाका नेल्सन सेमेडो, आन्ड्रे सिल्भालगायत खेलाडी परेका छन् । यसपटक एथ्लेटिको मड्रिडका युवा खेलाडी जुआओ फेलिक्स चोटका कारण टोलीमा परेका छैनन् ।
पोर्चुगलले नोभेम्बर १५ तारिखमा लिथुनियासँग आफ्नो घरमा खेल्दैछ । त्यको २ दिनपछि लक्जेमबर्गसँग अवे मैदानमा खेल्दैछ । समूह ‘बी’ मा रहेको पोर्चुगल हाल ६ खेलपछि ११ अंक बनाएर दोस्रो स्थानमा छ । ७ खेल खेलेको युक्रेन १९ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २२:०१